Malunga nathi-Inkampani ye-Eugeng yeHlabathi
Inkampani yase-Eugeng yeHlabathi
U-Eugeng ngumenzi ngobuchule kunye noyilo loomatshini bokuthambisa eShanghai . Siyaqhubeka nokuzama ukuphucula igama elikhulayo ngaphakathi kwishishini lezithambiso ngokuhlangabezana neemfuno zabathengi, kwaye siya kubonelela ngetekhnoloji yamva nje kunye neyona ndawo iphakamileyo kunye nolwazi ngesisombululo esifanelekileyo ngokuhlala sisengaphambili kwimfuno yomthengi.
Sinemveliso yethu yoomatshini mveliso kunye neqela elomeleleyo le-R & D e-Songjiang Industry Park.So sinokusebenzisana ukwenza iimveliso zenoveli kwaye sikunikeze nesiko elenzelwe wena. Siyila, ukuvelisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe koomatshini bokuqaba umlomo, oomatshini bokushicilela umgubo, oomatshini bokugcwalisa imilebe, oomatshini be-mascara, oomatshini bokukhonkxa iinzipho, oomatshini bokugcwalisa ipensile yezithambiso, oomatshini bomgubo wokubhaka, iilebhile, ipakethe yamatyala, omnye umbala oomatshini bokuthambisa njalo njalo.
Ngovuyo olukhulu, singathanda ukwenza ishishini kunye nenkampani yakho ehloniphekileyo ngeli thuba lokwandisa izinto esizenzayo. Ukuba uziva ngathi singayamkela iminqweno yakho okanye singaluncedo kuwe ngayo nayiphi na into, nceda ungathandabuzi ukuqhakamshelana nathi. Xa usenza isivumelwano noEugeng, awuyi kuba ngumthengi wethu uba liqabane lethu.
Inkampani yokuThengisa egxile koomatshini bokuthambisa
1.Wamkelekile i-OEM yebhokisi yeplastikhi
2. Wamkelekile u-OEM kwimveliso yezithambiso enjenge-lipstick, lip gloss, mascara njalo njalo.
3. Wamkelekile ukuba ube ngummeli welizwe lakho
4. Ixesha lewaranti ngunyaka omnye
5. Khupha iividiyo zenkxaso ezikwi-intanethi, iiyure ezingama-24 kwi-intanethi kunye nemanyuwali yenkonzo yobugcisa
6. Khupha izinto ezincedisayo nanini na xa ufuna
iimodeli ezintsha / unyaka
Ukufunyanwa okuzenzekelayo Equipment
Siyavuya kakhulu ukuthatha eli thuba ukwenza ishishini nawe.